Hey’adda Culimada Soomaaliyeed oo Ka Digay Ansixinta Dastuurka Qabya Qoraalka ( War Saxaafadeed ) | buqaqable.net
Hey’adda Culimada Soomaaliyeed oo Ka Digay Ansixinta Dastuurka Qabya Qoraalka ( War Saxaafadeed )
Posted on April 29, 2012 by Buqaqable.net
Muqdisho : Shir ay Saxaafada kula Hadleen Guddi ka tirsan Hay’adda
Culimada Soomaaliyeed iyo Aqoonyahano daraasad ku
Sameeyey dastuurka qabya Qoraalka ah ayaa lagu soo
Bandhigay qodobo ku jira dastuurka cusub oo ay ku sheegeen in ay halis ku yihiin jiritaanka Diinbta, Dalka iyo Dadkaba kuwaasoo ay ku baaqeen in si deg deg looga hortago loona joojiyo mashruuca ansixinta dastuurka.
Afhayeenka Hey’adda culimada Sheekh Nuur Baaruud Gurxan iyo Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah Gudoomiyaha Hey’adda Culimada ayaa si wada jir ah u shaaciyay qodobada ay u arkaan kuwa halista ah qodobadaasna waxaa ka mid ahaa
1- Waxaan cadeyn iswaafajinta shareecada iyo dastuurka (cutubka 1aad)
2- Kuma xusna qabyo qoraalka xuduudaha dalka iyo meesha uu adduunka kaga yaallo.
3- Lama sheegin inaan la qeybin karin dalka Soomaaliya.
4- Xoriyadda shaqsiga, xoriyada qawlka iyo xoriyada haweenka waa in sal looga dhigaa shareecadda.
5- Shuruuda madaxweynaha waa in lagu soo daraa inuu yaay ‘lab’ ku dhaqma shareecada.
6- Dhamaan masuuliyiinta dawlada waa in lagu xiraa shuruud ah amaano, hufnaan iyo asluub wanaag.
7- Guddiyada madaxa bannaan ee qaranka waa in lagu soo daraa guddiga ku dhaqanka shareecada iyo ilaalinta diinta.
8- Waxaa la yaab in qodobada aan la bedeli karin lagu daray ka mid noqoshada haweenka ee dawlada iyadoo qodobada la bedeli karo lagu daray arimaha ku saabsan diinta.
Hay’adda culimada Soomaaliyeed waxay soo jeedisay;
Shirka jaraa’id ee culimada waxay talooyin ugu soo jeediyeen xukuumadda KMG ah iyo guddiga gacanta ku haya dastuurka qabyada ah kuwaasoo beryahan ku gudajiray qabanqaabada shirweyne lagu ansixinayo dastuurka cusub. Waxaana talooyinkaasi ka mid ah;
– In la joojiyo mashruuca dastuurka gebi ahaan illaa inta la isla saxayo khaladaadka ku jira.
– In lagu dhaqmo dastuurkii 1960-kii iyo Axdiyadii KMG ahaa oo la habeeyey si waafaqsan dhaqanka iyo diinta.
– In wadatashi iyo baaris qoto dheer lagu sameeyo mashruuca dastuurka oo aan lagu degdegin.
« Aqri Warqad uu Menelik gii Ethiopia u Diray Quwadaha isticmaarka Sanadii 1891 uuna Ku Dalbanayay in Dhulka Soomaalida Lagu Gacan Siiyo Siduu u Qabsan Lahaa Dhamaan Shaqaalihii Saracen Puntland oo Xero Bosaso Ku Taala La isugu Keenay Kadib Dil Qaar Mas,uuliyiinteeda Ka Mid ah Loo Geystay »